Ciidamada dowladda Oo Howlgallo Ka Wada Duleedka Muqdisho – Goobjoog News
Ciidamada dowladda Oo Howlgallo Ka Wada Duleedka Muqdisho
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saakay ay howlgallo ka wadaan inta u dhaxeysa deegaannada Sarkuusta iyo Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho, kaasi oo amniga lagu sugayo.
Wararka waxay sheegayaan in howlgalkaan uu daba socdo weerar ay habeenkii xalay ahaa Al-shabaab kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo fariisin ku lahaa duleedka Muqdisho, inkastoo khasaaraha weerarkaasi ka dhashay aan la caddeyn.
Ciidamada ayaa baaraya sida la sheegay xaafadaha ku yalla halkaasi, iyadoo weli aan lasoo sheegin in howlgalkaan dad lagu soo qabtay iyo in kale.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgallada qaarkood oo aynu xiriir la sameynay ayaa inoo suuragelin inaan qadka taleefanka ku helno.
Waxaa jirin isku socod gaadiid iyo dadweyne inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Ceelasha biyaha, xilli maanta magaalada Muqdisho ay ka dhaceyso doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Dabley Weerartay Hoteel Ku Yaalla Magaalada Boosaaso
Magacyada 22-ka Musharrax Ee uTaagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya
Kaalinta Haweenka iyo Dhalinyarada Ku Jira BFS ee Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya